Cabsho: Jaaliyadaha Degaanka Somalida Ethiopia oo ka Cawday Wabishabeele.com – Rasaasa News
Cabsho: Jaaliyadaha Degaanka Somalida Ethiopia oo ka Cawday Wabishabeele.com
Aug 3, 2011 Cabsho: Wabishabeele.com, Jaaliyadaha Degaanka Somalida Ethiopia oo ka Cawday
Copenhagen, August 3, 2011 [ras] – Qoraal loo arkay meel ka dhac oo ay dhiilo ka keentay Jaaliyada Degaanka Somalida Ethiopia ee ka jirta dalalka reer galbeedka. Qoraalkaas oo ku soo baxay Bogga Wabishabeele July 31, 2011, ayey Jaaliyaduhu ka codsanayaan tafatiraha bogga in uu ka saaro cudur daarna ka bixiyo qoraalka.
Rasaasa.com; waxaa mahad leh Jaaliyadaha degaanka Somalida Ethiopia, ee jecel wanaaga, nabada iyo horumarka, kuwaas oo is garabtaagay nabadii ka curatay degaanka Somalida Ethiopia, la,aantoodna hubaal ayna hirgasheen nabadu.
Rasaasa.com, marna ma jecla in ay aragto doc wareen iyo daan daansi dhex gala dadweynaha nabada Jecel ee Somalida Ogadeeniya. Dadkase dareen lagama waayo ee waxaa qoraal cabasho ah oo xushmadaysan na soo gaadhsiiyey qaar ka mid ah Jaaliyadaha Somalida Ethiopia ee galbeedka, kaas oo ay kaga cabanayaa qoraal ku soo baxay bogga war baahinta ee wabishabeele.
Jaaliyad [community], waa dad isku dan ah, isku degaana ah, oo ku nool dal aan ahayn dalkii ay asal ahaan ka soo jeedeen. Jaaliyaduhu aslankoodaba waxay u abuurmaan in ay iska kaalmaystaan dhibaatooyinka kaga iman kara dalka ay joogaan iyo ka warhaynta dalkoodii.
Jaaliyaduhu way ka madax banaan yihiin maamulka dalka ay ka soo jeedaan, way mucaaradi karaan maamulka markaas jira wayna taageeri karaan haday u arkaan wanaag. Maamulka dalka ay ka yimaadeena xaq uma laha in uu Jaaliyadaha ku khasbo in ay taageeraan ama hadii ayna taageerin ayna tagi karin dalkooda.
Cidii ka mid ah Jaaliyaadka degaanka Somalida Ethiopia ee galbeedka ku nool ee aaminsan hadaan la taageerin dawlada degaanka Somalida ka jirta waxyeelay la kulmi taasi waa been, hadii ay ku dhaqanto xukuumada maanta jirtaana way khaldan tahay. Abaabul colaad iyo dagaal iyadu waa arin gooni ah.
Jaaliyadaha dibadu waa xoog ka madax banaa maamulada ka jira degaanka, waxayna cadaadis ku saari karaan maamulka jira in uu muujiyo wax qabad iyo horumar [pressure group].
Maamuladii hore uga jiray degaanka Somalida Ethiopia, dhibaatooyin badan ayey u gaysteen dadweynaha gudaha iyo dibadaba, laakiin waxay cudur daar ka dhiganayeen in gabalka ay ka jirtay colaad xun, lana kala garan waayey taageerayaasha dawlada iyo kuwa Jabhadihii dagaalka waday.
Waxaa xaqiiq ah in bilowgii nabada ay labadii Jabhadood ee nabada qaatayba ay kaxaysteen Jaaliyadihii taageeri jiray. Waana dhab in ay Jiraan xubno Jaaliyada ah oo aan dhinacna raacsanayn, oo u baahan in dhinac la raaciyo.
Dawlada wadaaga ah ee Ethiopia, waxay aaminsan tahay oo ay in badan ku cel celisaa in la soo dhaweeyo dadka Qurba joogta ah ee u dhashay dalka Ethiopia, nooc kasta oo ay yihiin laguna dhiiri galiyo in ay dalka dib ugu soo laabtaan.
Masuuliyiinta dawlada degaanka Somalidu iyaga oo arintaas ka duulaya, ayey heshiisyadii nabada ee Jabhadaha, ka dib bilowday in ay xidhiidh toos ah la yeelato Jaaliyaha u dhashay degaanka Somalida, haday uruursan yihiin iyo hadii ayna uruursanaynba. Arintaas oo ay aad ugu faraxsan tahay dawlada degaanku Jaaliyaduhuna si la mid ah.
Iyada oo ay arintaasi jirto, waxay masuuliyiinta Jaaliyaadku deelqaaf iyo meel ka dhac u arkaan qoraalka ku soo baxay bogga wabishabeele. Waxayna ka codsanayaan tafatirayaasha bogga in ay ka saaraan qoraalkaas, kana bixiyaan cudur daar.
Masuuliyada rasaasa.com ma ah in ay faalayso qoraalka ku soo baxay bogga dhigeeda ah, laakiin waxay Jaaliyadu xaq ugu leedahay in ay baahiso baahidooda.
Halkan ka daalaco qoraalka Wabishabeele July 31, 2011
Ciidamada Maamulka Somaliland oo Xasilooni Dari ka Wada Xadka uu la Wadaago Degaanka Somalida Ethiopia.